सावधान ! थप तीन देशमा फैलियो मङ्कीपक्स भाइरस, नेपालमा पनि यसकाे जाेखिम - Mitho Khabar
June 18, 2022 mithokhabarLeaveaComment on सावधान ! थप तीन देशमा फैलियो मङ्कीपक्स भाइरस, नेपालमा पनि यसकाे जाेखिम
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मङ्कीपक्सको केस रेकर्ड गर्ने पहिलो खाडी मुलुक बनेको छ । चेक गणतन्त्र र स्लोभेनियाले पनि मंगलबार आफ्नो पहिलो केस रिपोर्ट गरेका छन् । अफ्रिका बाहिर १८ अन्य देशहरूमा यो भाइरस फैलिसकेको छ ।
त्यो संख्या अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर विज्ञहरू भने सामान्य जनसंख्याको लागि समग्र जोखिम कम रहेको बताउँछन् । युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा भाइरसको प्रकोप भेटिएको छ। यसका लक्षणहरूमा अक्सर ज्वरो र शरीरमा दा-गहरू समावेश हुन्छन् – तर संक्रमण सामान्यतया हल्का हुन्छ। युएईका स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार हालसालै पश्चिम अफ्रिका भ्रमण गरेका एक यात्रीमा यसको सङ्क्रमण देखिएको र अहिले उनको उपचार भइरहेको छ।
याे पनि, विश्वमा फैलिएको बाँदरेखटिरा (मंकीपक्स) को संक्रमण नेपालमा पनि फैलनसक्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आम नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ ।
अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, इजरायल, बेलायत, जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड्स, इटली र स्विडेनलगायत १८ वटा देशमा मंकीपक्सको संक्रमण फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले पुष्टि गरेसँगै नेपाल सरकारले पनि सचेतनाका लागि आग्रह गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन आह्वान गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंकीपक्स संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट नेपाल भित्रने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई को- भिड– १९ मा जस्तै दुई हप्ता क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियम लागु गर्न आग्रह गरेको छ । मंकीपक्स संक्रमण भएका व्यक्तिमा शरीरमा चिलाउने खटि`रा वा दाग देखिने र जिउभरि फैलिने हुन्छ ।
यसमा ज्वरो आउने, जीउ सुन्निने र ढाड, टाउको र मांसपेशी दुख्नेगर्छ । संक्रमण भएको केही दिनमा अनुहारमा पनि बिमिराहरू देखापर्न थाल्छन् । डब्लूएचओले जनाएअनुसार मंकीपक्स झट्ट हेर्दा फोहोर ख`टिरा वा ठे`उला भनेर चिनिने गरेको रोगजस्तै देखिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता सागर अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।
डब्लूएचओका अनुसार मंकीपक्स भाइरस एकबाट अर्को व्यक्तिमा घा`उको र`स वा क`णबाट र हा`च्छिउँ गर्दा निस्कने थु`कलगायतका तरल पदार्थका माध्यमबाट फैलिने गर्दछ । संक्रमित व्यक्तिको शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ श्वासनली, आँखा, मुख वा नाकबाट छिर्नसक्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, संक्रमित जनावरहरू जस्तै बाँ`दर वा मु`साको सम्पर्कबाट पनि यो भा`इरस सर्नसक्छ । संक्रमितले प्रयोग गरेका लुगा वा सामानबाट पनि सर्नसक्ने डब्लूएचओले जनाएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेकाे छ ।